အခွင့်အရေးနဲ့ တာဝန် | မေတ္တာရိပ်
← ဓမ္မစကြာ တရားတော်
အခွင့်အရေးနဲ့ တာဝန်	Posted on August 23, 2009	by mettayate အခက်အခဲဆိုတာ ဘ၀ရဲ့သဘာဝတွေပါပဲ။
ဘာအခက်အခဲမှမရှိတဲ့ ဘ၀ကိုနေရတဲ့သူဟာ ဘာရင့်ကျက်မှုမှ မရှိနိုင်ဘူး။
အားလုံးသဘောထားကြီးကြီးနဲ့ စိတ်ထားကောင်းကောင်းနဲ့ ဆက်ဆံရင် အခက်အခဲတွေ ပိုပြီးတော့ အဆင်ပြေသွားမယ်။ ပိုပြီးတော့ ပြေလည်သွားမယ်။
ပြဿနာကို နားမလည်နိုင်ရင် မဖြေရှင်းနိုင်ရင် ပြဿနာကို ပိုကြောက်တယ်။
ပြဿနာကို နားလည်လာရင် ပြဿနာကို မကြောက်တော့ဘူး။
အခက်အခဲတွေကို နားလည်ပြီး ဖြေရှင်းလို့ အရည်အချင်းတိုးလာတာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုတိုးလာတာကို ခံစားရတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုတိုးလာအောင်ပဲ လုပ်ချင်နေတယ်။
ဒါပေမယ့် ကိုယ်နိုင်သလောက် အခက်အခဲရှိမှကောင်းတယ်။ ရုန်းကန်နေမှ ကောင်းတယ်။ အခက်အခဲတွေဟာ အကျိုးရှိပါတယ်။
တချို့လူတွေဟာ အခက်အခဲမရှိတဲ့ဘ၀ကို တောင်းတကြတယ်။
အခက်အခဲမရှိတဲ့ဘ၀မှာ လုပ်စရာမရှိဘူး။ ဉာဏ်လည်းမထုတ်ရတော့ဘူး။
၀ိရိယလည်း မထုတ်ရတော့ဘူး။ သည်းခံရတယ်ဆိုတာလည်း မရှိတော့ဘူး။ သဘောထားကြီးရတယ်ဆိုတာလည်း မရှိတော့ဘူး။
ပြဿနာတွေ အခက်အခဲတွေ ဒုက္ခတွေ ပညာရဖို့နဲ့ အသိဉာဏ်ကြီးဖို့ရာ အတွေ့အကြုံတွေပါ။
အခက်အခဲမရှိတဲ့ဘ၀မှာ သစ်ပင်တောတောင်မရှိတဲ့ လွင်တီးခေါင်ကြီးနဲ့တူတယ်။ အခက်အခဲမရှိတဲ့ဘ၀မှာ စိတ်ဓါတ်နဲ့ အသိဉာဏ် ရင့်ကျက်မှု မြင့်မြတ်မှု ဖြစ်လာဖို့ အခွင့်အရေးမရှိတဲ့ဘ၀ပဲ။
ဘ၀ဆိုတာ စာမေးပွဲအဆင့်ဆင့်ပဲ။ နေ့တိုင်းစာမေးပွဲ အစစ်ခံနေရတာနော်။
စာမေးပွဲတွေကို အစစ်ခံရပြီး အောင်မြင်သွားတဲ့အခါမှာ ပိုပြီးတော့ ဉာဏ်ကြီးတဲ့သူဖြစ်လာတယ်။
ကြီးပွားတဲ့သူဖြစ်လာတယ်။ အသိဉာဏ်ရော စိတ်ဓါတ်ရော ကြီးပွားလာတယ်။
ဒုက္ခနဲ့မကြုံဘဲနဲ့ ကိုယ်ဆင်းရဲမှု မကြုံဘဲနဲ့ ဘ၀ခရီးကိုဖြတ်သန်းသွားလို့ မရပါဘူး။
တရားအားထုတ်ခြင်းအားဖြင့် စိတ်တည်ငြိမ်မှု အေးချမ်းမှု ရင့်ကျက်မှု ရလာမယ်။
ပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်း အဆင်မပြေမှုတွေ ရှိမှာပဲနော်။
ဒါ့ကြောင့် ဗုဒ္ဓက နကုလပိတာ
“အာတုရ ကာယဿ မေ သတော၊ စိတ္တံ အနာတုရံ ဘ၀ိဿတ။”
ကိုယ်မှာပင် နာကျင်နေသော်လည်း စိတ်မှာ မနာကျင်အောင် နေရမယ်။
ကိုယ်ဘာကြောင့် စိတ်ဆင်းရဲသွားတာလဲ။ ငါစိတ်ဆင်းရဲတဲံအကြောင်းဟာ ငါ့အတွင်းမှာ ရှိနေတယ်။
အဲ့ဒီလိုမြင်အောင် ကြည့်ရမယ်။ အဲ့ဒီလိုမြင်သွားရင် ကိုယ့်အတွက် အကျိုးများဆုံးပဲ။
နောက်မှ သူဘာမှားသွားလည်းဆိုတာကို ကြည့်ပါ။
ကိုယ့်လုပ်တဲ့ အလုပ်ကိုအကောင်းဆုံးစိတ်ထား အကောင်းဆုံးအရည်အချင်းနဲ့ လုပ်နိုင်အောင်၊ ကိုယ့်စိတ်ကို တည်ငြိမ်အောင် အေးချမ်းအောင် စိတ်ချမ်းသာနေအောင် သတိနဲ့နေတဲ့အလေ့အကျင့်ကို အချိန်မရွေး နေရာမရွေး လုပ်သင့်တယ်။
ရေရှည်မှာ ကိုယ်လုပ်တဲ့အလုပ်ဟာ ကိုယ့်ဘ၀ကို အဆုံးအဖြတ်ပေးပါတယ်။
တစ်ခါက ပုဏ္ဏားက ဘုရားကို စေတ၀န်ကျောင်းရှေ့မှာ နေ့တိုင်းလာဆဲတယ်။ ကြာတော့လည်း သူ့ဘာသာသူ ရပ်သွားတယ်။ ဒီလောက်ဆဲနေတာ ဘာကြောင့် ဘာမှပြန်မပြောတာလဲလို့ ဗုဒ္ဓကိုမေးတယ်။
ကိုယ်စိတ်ဆင်းရဲမှုဖြစ်ရတာဟာ ကိုယ့်ဘက်ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ပါနေတယ်ဆိုတာကို သဘောပေါက်ဖို့ လိုတယ်။
You have one and only one central need in your life to become the best that you can to realise the best of your potential.
သင့်ဘ၀မှာ အဓိကအကျဆုံး အခြေခံအကျဆုံး အချက်အခြာအကျဆုံး လိုအပ်ချက်တစ်ခုပဲရှိပါတယ်။. ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကိုယ်ဖြစ်နိုင်သမျှ အကောင်းဆုံးဖြစ်လာဖို့။ ကိုယ့်မှာအရည်အချင်းအများကြီးရှိတဲ့ထဲက အကောင်းဆုံးအရည်အချင်းကို အကောင်အထည်ဖော်ဖို့။ အဲဒါဟာ သင့်ဘ၀မှာ တစ်ခုတည်းသော အချက်အချာအကျဆုံး အဓိကအကျဆုံး လိုအပ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။
အဲ့ဒါတွေကို လုပ်နိုင်ရင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို သိပ်ကျေနပ်မှာပဲ။ ကိုယ့်ဥစ္စာပစ္စည်းတွေ တစ်ခုမှမကျန်အောင် ဆုံးရှူံးသွားပါစေဦး။ ကိစ္စမရှိဘူး။ ခံနိုင်ရည်ရှိသွားတယ်။
လူတွေ ဘာလို့ မငြိမ်းချမ်းသလဲ ဆိုတာကို အရိုးရှင်းဆုံးဖြေရင် မငြိမ်းချမ်းတာကို တွေးနေလို့ မငြိမ်းချမ်းတာပါ။
ငါးမိနစ်လောက် မငြိမ်းချမ်းတာကို မတွေးဘဲနေလိုက်ပါ။ သူ့အလိုလိုငြိမ်းချမ်းလာပါလိမ့်မယ်။
အတွေးတွေရဲ့အစွမ်းသတ္တိတွေကို သိဖို့ အင်မတန်လိုအပ်တယ်။
မကောင်းတာတွေးနေရင် မကောင်းတာတွေပဲ ဖြစ်လာမှာပဲ။ ကောင်းတာတွေးနေရင် ကောင်းတာတွေ ဖြစ်တာများမှာပဲ။
ဘယ်လိုလုပ်ရင် ရမယ်ဆိုတဲ့နည်းလမ်းကိုလည်း ငါသိတယ်ဆိုတဲ့ အဲ့ဒီလေးပါးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့သူဟာ မျှော်လင့်ချက်ရှိတဲ့သူပဲ။
It is your right and responsibility to beahappy peaceful person.
ကြည်လင်ရွှင်လန်းနေတဲ့သူ၊ ငြိမ်းချမ်းနေတဲ့သူဖြစ်ဖို့ သင့်မှာအခွင့်အရေးလည်းရှိတယ်။ တာဝန်လည်းရှိတယ်။
တရားအားမထုတ်တဲ့သူဟာ စိတ်မှာချို့တဲ့မှုရှိပါတယ်။ တရားအားမထုတ်တဲ့သူဟာ စိတ်မကျန်းမာနိုင်ဘူး။
သူပျော်ရွှင်ရင် အရူးတစ်ယောက်လိုပျော်ရွှင်တယ်။ စိတ်ညစ်တဲ့အခါမှာ အရူးတစ်ယောက်လိုပဲ ဖြစ်တယ်။ Healthy မဖြစ်ဘူး။
ကိုယ့်စိတ်ကို ကိုယ်သိရင်ပဲ loneliness အဖော်မရှိသလို ခံစားရတာ တော်တော်သက်သာသွားတယ်။
ကိုယ့်စိတ်ကို သေသေချာချာသိရင် သောကလည်းတော်တော်သက်သာသွားတယ်။
လုပ်စရာရှိတာတွေကို နည်းလမ်းရှာပြီးလုပ်သွားနိုင်တယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်း ယုံကြည်လာတယ်။
တစ်ခုခုကြုံလိုက်တိုင်း ချက်ချင်းတုံ့ပြန်တဲ့သူဟာ ချင့်ချိန် စဉ်းစားတတ်တဲ့ဉာဏ်မရှိဘူး။ လွတ်လပ်မှုလည်း သူ့မှာမရှိဘူး။
လုပ်သင့်တာကို အေးအေးဆေးဆေးနဲ့ လုပ်သွားတယ်။ ပြောသင့်တာကို အေးအေးဆေးဆေးနဲ့ ပြောသွားတယ်ဆိုရင် သူ့မှာ သတိရှိတယ်။ ဉာဏ်ရှိတယ်။ ချင့်ချိန်နိုင်တယ်။ သူ့မှာ လွတ်လပ်မှုရှိတယ်။
ကျေးဇူးတင်တတ်စိတ်ဟာ သုခဘုံကြီးပါ။ အင်မတန်စိတ်ချမ်းသာတဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်။ ဒါ့ကြောင့်ကျေးဇူးကိုရှာပြီး တင်ဖို့ လိုပါတယ်။
အမှန်တော့ တစ်ဦးအပေါ် တစ်ဦး၊ တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ သွယ်ဝိုက်ဖြစ်စေ တစ်ဦးကျေးဇူး တစ်ဦးမှာရှိပါတယ်။ ကြည့်တတ်ရင် ရန်သူတောင်မှ ကျေးဇူးရှိပါတယ်။ သူ့ကြောင့်ကိုယ့်မှာ ရင့်ကျက်လာတယ်။ တိုးတက်လာတယ်။ ခံနိုင်ရည် ပိုရှိလာတယ်နော်။
အခက်အခဲ ဒုက္ခတွေဟာ ကိုယ့်ကိုရင့်ကျက်အောင် လုပ်ပေးတယ်။
ကိုယ့်ကို အပြစ်တင်တဲ့သူ၊ ဝေဖန်တဲ့သူကအစ တကယ်တော့ ကျေးဇူးရှင်ပါပဲ။
အကူအညီပေးတဲ့သူဆိုတော့ ပြောဖွယ်ရာမရှိပါဘူး။ အင်မတန် ကျေးဇူးကြီးပါတယ်။
သိပြီးတော့ မလုပ်လို့ရှိရင် မသိသေးလို့ပဲ။
နဲနဲသိရင် နဲနဲလုပ်ပါ။ များများသိရင် များများလုပ်ပါ။
အညွှန်း- ဆရာတော် ဦးဇောတိကရဲ့ အခွင့်အရေးနဲ့တာဝန် စာအုပ်မှ ကောက်နှုတ်ထားပါတယ်။
This entry was posted in ကောက်နှုတ်မှုများ and tagged ဆရာတော် ဦးဇောတိက. Bookmark the permalink.	← ဓမ္မစကြာ တရားတော်